‘मोन्टेसोरी शिक्षा नानीबाबुको चौतर्फी विकासको आधार हो’ - विवेचना
‘मोन्टेसोरी शिक्षा नानीबाबुको चौतर्फी विकासको आधार हो’
December 3, 2017 463 Views
चौतर्फी विकास अर्थात् बौद्धिक, मानसिक, शारीरिक र व्यक्तिगत विकास । यो सबै तब सम्भव हुन्छ, जब कुनै पनि बालबालिकाले उचित वातावरण, शिक्षा-दिक्षा प्राप्त गर्दछन् । आजको व्यस्त दैनिकीमा अभिभावकले आफ्ना नानीबाबुहरुलाई पर्याप्त समय दिन सकिरहेका हुँदैनन् । यो अवस्थामा स्थानीयस्तरमा सञ्चालित मोन्टेसोरी विद्यालय सहायकसिद्ध बनेका छन् । मोन्टेसोरी विद्यालयको भूमिका वास्तवमै समाजको लागि देन हो । बालबालिकाको समग्र विकासको लागि समयमा खुवाउने, सुताउने, खेलाउने, पढाउने जस्ता महत्वपूर्ण दैनिकीहरुलाई मोन्टेसोरीले आवश्यक समय तालिकामा गराउने गरेका छन् । साथै भाषिक विकास र मिठास, भाषिक शुद्धता, राम्रो आचरण, सभ्य बोलीवचन, विचार व्यक्त गर्ने क्षमताको विकास आदि क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान र्पुयाइरहेको छ । बालबालिकालाई केन्द्रविन्दु मानेर चौतर्फी विकासको लागि गरिने क्रियाकलापहरु मोन्टेसोरी विद्यालयको शैक्षिक कार्यक्रमभित्र समाविष्ट भएका छन् । जहाँ कुनै जबरजस्ती बिना नै खेलेर र बुझेर ज्ञान प्राप्त गर्न नानीहरुलाई वातावरण दिइन्छ । मोन्टेसोरी शिक्षा र यसको अवस्थाबारे स्टार चाइल्ड केयर एन्ड रिसर्च सेन्टर मोन्टेसोरी बुधबारेका सञ्चालक तथा मोन्टेसोरी एसोसिएसन झापाका अध्यक्ष भीम श्रेष्ठसँग विवेचनाले गरेको कुराकानी :
झापामा मोन्टेसोरी विद्यालयको अवस्था कस्तो छ ?
झापामा मोन्टेसोरी विद्यालयहरुको छाता संगठन निर्माण भएको धेरै भएको छैन । तर, हामी संगठित भएदेखि अध्यक्षको जिम्मेवारीमा छु । झापा जिल्लामा रहेका मोन्टेसोरी विद्यालयहरुको अवस्था अलिक दयनीय नै रहेको पाएँ । किनभने प्राय: मोन्टेसोरी विद्यालयहरु भाडाका भवनमा सञ्चालित छन् । विद्यार्थी संख्या न्यून छन् । मासिक फि सस्तो छ । आवश्यक दक्ष जनशक्ति पाउन अत्यन्तै कठिन छ । आम्दानीको तुलनामा खर्चका भुक्तानीहरु उच्च रहेका छन् । तसर्थ आर्थिक रुपमा अत्यन्तै दयनीय अवस्था रहेको छ । तर, हामी यो कुरामा भने अत्यन्तै सन्तुष्ट छौँ कि हामीले सतप्रतिशत सबै अभिभावकहरुलाई चित्त बुझाएका छौँ । र, बालबालिकाहरुको शिक्षा र विकास सम्बन्धी कुनै कम्प्लेन आउन दिएका छैनौँ । आशा छ हाम्रो यो योगदानको अभिभावकहरुबाट उचित कदर र सम्मान भई आगामी दिनमा सबै १८ महिनादेखि ८ वर्षसम्मका नानीबाबुहरुलाई मोन्टेसोरी विद्यालयमा भर्ना गरी हाम्रो अहिलेको अवस्थाबाट माथि उक्लन साथ दिनु हुनेछ ।
मोन्टेसोरी शिक्षा महँगो हो ?
केही मोन्टेसोरी विद्यालय होलान्, जसले अभिभावकको ढाड सेक्ने गरी फि लिएका छन् । तर, म के भन्छु भने म मोन्टेसोरी एसोसिएसन झापाको अध्यक्ष पनि हुँ र झापा लगायत देशका विभिन्न भूगोलमा रहेका मोन्टेसोरी विद्यालयहरुमा पुगेको पनि छु । झापामा रहेका कुनै पनि मोन्टेसोरी विद्यालयमा महँगो फि रहेको मैले पाएको छैन । र, म के भन्छु भने हामी शिक्षा क्षेत्रमा लागेका व्यक्तिहरुमा अरुलाई आर्थिक रुपमा शोषण गर्ने सोच हुनु हुँदैन । यति हो भ्रम फैलाउनको लागि कसैले यस्तो कुरा गरिराखेको छ भने हामीलाई सूचना दिनुहोस् हामी उहाँलाई बुझाउनेछौँ । अर्काे कुरा के हुन्छ भने मोन्टेसारी विद्यालयमा पौष्टिक खाजा खुवाउँदा अलिकति केही बढी शुल्क लाग्न सक्छ । तर, नानीको स्वास्थ्य भन्दा महँगो पौष्टिक खानेकुरा कदापि होइन । तसर्थ समग्र रुपमा भन्दा मोन्टेसोरी विद्यालयहरु महँगो छैनन् । यो भयो समग्र झापा जिल्लाभरिको विद्यालयको फिको कुरा । अब रहयो स्टार मोन्टेसोरीको कुरा गर्दा यहाँ न्यूनतम् मासिक शुल्क र दिनमा खुवाइने खानाको लागि अतिरिक्त ७०० रुपैयाँ लिइन्छ । के यो पनि महँगो हो त ? त्यसैले हल्लाको भरमा नलागौँ ।
स्टार मोन्टेसोरीको अवस्था चाहिँ के छ ?
स्टार मोन्टेसोरी विद्यालय विगत ३ वर्षदेखि एकल व्यवस्थापनबाट सञ्चालित विद्यालय हो । जसमा मलाई सञ्चालिकाका रुपमा सङ्गीता बस्नेतले बलियो साथ दिनुभएको छ । यो बालबालिकाहरुको मात्र विद्यालय नभएर यहाँ मोन्टेसोरी तालिम पनि सञ्चालन गर्दै आएका छौँ । यहाँ हामीकहाँ सबै दक्ष शिक्षिका हुनुहुन्छ । मातृमाया दिनुहुने कर्मचारी दिदीहरु हुनुहुन्छ । अभिभावकत्व प्रदान गर्ने सञ्चालिका हुनुहुन्छ । सुरक्षाको लागि कम्पाउण्ड वाल र सिसिटिभी जडान गरिएको छ । यातायातको लागि भेनको व्यवस्था गरिएको छ । बिदा सक्दो कम मात्रामा दिने व्यवस्था मिलाइएको छ । नानीबाबुलाई बाहिरी ज्ञान दिने उद्देश्यले कहिले मनोरञ्जानत्मक पिकनिक त कहिले घुमघाम गराउँदै आएका छौँ । मोन्टेसोरी भनेकै व्यावहारिक तरिकाबाट रमाइलोसँगै शिक्षा दिइने पद्धति हो । नृत्य तथा साङ्गीतिक कक्षाहरु छन् । हरेक प्रकारका चाडपर्वहरु, बालबालिकाको जन्मदिन विशेष कार्यक्रम गरेर मनाउने गरिन्छ । ताकि बालबालिकाहरुलाई सामाजिक सद्भावबारे ज्ञान प्राप्त होस् । मोन्टेसोरीका लागि आवश्यक सम्पूर्ण सामग्री र श्रव्यदृश्य कक्षाहरु गराइने गरेको छ । अत्यन्तै वातानुकूलित कक्षाकोठाहरु रहेका छन् ।
तपाईं आफ्नो विद्यालयलाई अन्य विद्यालयसँग तुलना गर्नुपर्दा कसरी गर्नुहुन्छ ?
तुलना त त्यहाँ हुन्छ, जहाँ अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा रहन्छ । र, यस बुद्धशान्ति गाउँपालिकाभित्र रहेका सबै शैक्षिक संस्थाहरु एक अर्काको प्रतिस्पर्धी नभएर मित्रवत् रुपमा सञ्चालित छन् । तसर्थ तुलना गर्नुभन्दा पनि के कस्तो अवसरहरु छन् भन्ने कुरा गर्दा राम्रो होला । यस स्टार मोन्टेसोरी अलिक फरक किसिमबाट सञ्चालित छ । जस्तो कि, यहाँ कक्षामा विद्यार्थीको अनुपात, खेल सामग्री, खेल्ने ठाउँ, सुत्ने ठाउँ, खाने खाना र खाजा अलिक फरक छन् । हामीकहाँ कुनै पनि कुरामा कम्प्रमाइज हँुदैन । स्वच्छ, स्वस्थ र पौष्टिक खाना र खाजा तथा बालमनोविज्ञानमा आधारित शिक्षण विधि हाम्रो बटम पोइन्ट हुन् ।
क्वालिटी र क्वान्टिटीलाई कसरी व्यवस्थापन गरिरहनु भएको छ ?
यी दुई शब्द विद्यालय सञ्चालनको सन्दर्भमा अत्यन्तै गम्भीर शब्द हुन् । हामी क्वालिटी र क्वान्टिटी दुवैलाई सन्तुलित ढङ्गमा लैजान्छौँ र लगिरहेका छौँ । विद्यार्थी संख्या र शैक्षिक गुणस्तर दुवैलाई एकदमै नजिक राखेर कुनै पनि समस्या आउन नदिने गरी उचित व्यवस्थापन गरेका छौँ ।
भविष्यको योजना पनि केही छन् ?
भविष्यको योजनाभन्दा पनि हामी वर्तमानकै लागि योजना बनाउँछौँ । हाल हामी कक्षालाई प्रविधियुक्त बनाउने लक्ष्य लिएर अगाडि बढेका छौँ । र, आउँदा दिनमा जे चिजको आवश्यकता महसुस हुन्छ, तत्कालै लागु गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ ।
Previous इलाममा वाम गठबन्धन बलियो
Next बिर्तामोडमा सुरु भयो बी एन नुडल्स उद्योग